Vaovao - Inona no fanasokajiana ny lamba?
Ilay antsoina hoe lamba dia manondro ireo zavatra vita amin'ny lamba vita amin'ny kofehy lamba. Ny lamba ankapobeny dia azo sokajiana araky ny fampiasa sy ny fomba famokarana. Araka ny tanjon'ny lamba dia azo zaraina ho sokajy telo: lamba lamba, haingon-trano haingon-trano, lamba indostrialy.
Lamba ho an'ny akanjo.
Ny lamba ho an'ny akanjo dia ahitana lamba lamba isan-karazany ampiasaina amin'ny fanamboarana akanjo, ary koa kojakojam-panaka isan-karazany toy ny kofehy fanjairana, fehikibo vita amin'ny elastika, firakofana vozon'akanjo, firakofana, ary akanjo efa vita vita vita vita vita vita amin'ny vita, fonon-tanana, ba kiraro, sns
Ny haingon-trano haingon-trano dia misongadina kokoa noho ny lamba hafa amin'ny resaka firafitry ny karazany, ny lamina ary ny loko, ary azo lazaina ho karazana Zavakanto sy asa tanana. Ny lamba haingon-trano dia azo zaraina ho lamba anatiny, lamba fandriana ary lamba ivelany.
Ny lamba indostrialy dia be mpampiasa amin'ny karazany maro karazana, toy ny lamba volondavenona, lamba basy, lamba sivana, efijery, dingana ambany, sns.
Ireto misy fiasa amin'ny antsipiriany amin'ny lamba fampiasa matetika:
1. Lamba landihazo
Ny landihazo no anarana ankapobeny amin'ny karazana lamba landihazo. Izy io dia ampiasaina hanamboarana lamaody, akanjo mahazatra, atin'akanjo ary lobaka. Ny tombony azony dia mora ny mitazona hafanana, malefaka ary manakaiky ny vatana, ny fifohana ny hamandoana ary ny fifindran'ny rivotra madio. Ny fatiantoka dia mora mihena, ketrona, bika tsy dia mahitsy sy tsara tarehy, amin'ny akanjo tsy maintsy vy foana.
Hemp dia karazan-damba vita amin'ny hemp, rongony, ramie, jute, sisal, akondro ary karazan-java-maniry hemp hafa. Ampiasaina matetika amin'ny fanaovana akanjo mahazatra sy miasa izy io, ary amin'izao fotoana izao dia ampiasaina ihany koa izy io hanaovana akanjo fahavaratra mahazatra. Ny tombony azony dia ny tanjaka avo, ny fitrohana ny hamandoana, ny fitarihana ny hafanana ary ny faharetan'ny rivotra tsara. Ny fatiantoka azy dia tsy dia mahazo aina loatra, ny endrika miseho ho henjana, henjana.
Ny landy dia teny ankapobeny amin'ny lamba landy isan-karazany vita amin'ny landy. Toy ny landihazo, manana karazany maro sy toetra samihafa izy io. Azo ampiasaina hanamboarana akanjo isan-karazany, indrindra ho an'ny akanjom-behivavy. Ny tombony azony dia maivana, milamina, malefaka, malama, misy rivotra, maro loko, manankarona, manja sy kanto, mahazo aina. Ny tsy fahampiana dia mora ketrona, mora entina, tsy ampy tanjaka, malazo haingana.
Ny volon'ondry, antsoina koa hoe volon'ondry, dia teny mahazatra amin'ny lamba vita amin'ny volon'ondry sy cashmere isan-karazany. Matetika izy io dia mety amin'ny akanjo ofisialy sy avo lenta toy ny akanjo, akanjo, palitao, sns. Ny tombony azony dia mahatohitra ketrona sy mahatohitra fitafiana, mahatsapa tanana malefaka, marevaka sy mazava, lasitike, hafanana mahery. Ny maharatsy azy dia ny fahasarotana amin'ny fanasana, tsy mety amin'ny fanaovana akanjo fahavaratra.
Ny hoditra dia karazan'akanjo volom-biby vita amin'ny fanaovana tanna. Izy io dia ampiasaina hanamboarana akanjo lamaody sy ririnina. Azo zaraina amin'ny sokajy roa izy io: ny iray dia ny hoditra, izany hoe ny hoditra voatsabo amin'ny volon'ondry taloha. Ny faharoa dia ny volom-borona, izany hoe ny hoditra misy volon'ondry efa voatsabo. Ny tombony azony dia maivana sy mafana, kanto ary lafo. Ny fatiantoka azy dia lafo, lafo ny fitahirizana ary ny fitaizana be antitra, noho izany dia tsy mety amin'ny famelabelarana izany.
6. fibre simika
Ny fibre simika dia ny fanafohezana ny fibre simika. Izy io dia karazana lamba vita amin'ny fitambaran'ny molekiola avo. Amin'ny ankapobeny dia mizara sokajy roa izy io: fibre artifisialy sy fibre synthetic. Ny tombony iraisan'izy ireo dia ny loko mamirapiratra, ny volon-koditra malefaka, ny draping, ny malama ary ny mahazo aina. Ny fatiantoka aterak'izy ireo dia ny fanoherana ny fitafy, ny fanoherana ny hafanana, ny fifohana ny hamandoana ary ny tsy fahitàna permeabilité, mora simba rehefa misy ny hafanana, ary mora mamokatra ny electrostatic. Na dia azo ampiasaina hanamboarana karazana akanjo isan-karazany aza izy io dia tsy avo ny haavon'ny ankapobeny ary sarotra ny mankany amin'ny efitrano mihaja.
Ny fifangaroana dia karazana lamba izay manambatra ny fibre voajanahary sy ny fibre simika amin'ny ampahany iray, izay azo ampiasaina hanamboarana karazana akanjo isan-karazany. Ny tombony azony dia tsy mandray fotsiny ny tombotsoan'ny landihazo, hemp, landy, volon'ondry ary fibre simika, fa ny fisorohana ny lesoka ihany koa araka izay azo atao, ary somary ambany ny sandany, noho izany dia malaza izy io.